22 / 06 / 2017 | RayHaber | raillynews
Maalinta: Juun 22, 2017
Gaadiidka dadweynaha ee bilaashka ah ee Ramadan
Gaadiidka Dadweynaha ee Diyarbakır inta lagu gudajiro Xilliga Bisha Barakeysan ee Ramadaan: Diyarbakır Magaala-weynta waxay bixin doontaa adeegyo gaadiid dadweyne oo lacag la'aan ah Ramadaanka darteed. Gaadiidka Dadweynaha waa u lacag la'aan muwaadiniinta inta lagu jiro fasaxa, laga bilaabo 12.00 fiidka [More ...]
Gaadiidka Dadweynaha ee Bayram ee Erzurum Free
Gaadiidka Dadweynaha ee Bayram ee Erzurum Bilaash: Gaadiidka Dadweynaha ee Erzurum waxay noqon doonaan bilaash maalinta koowaad ee Ramadaanka. Maalintii koowaad ee iida, muwaadiniinta Dawlada Hoose, basaska dadweynaha ee gaarka loo leeyahay iyo basaska yar yar ee ka hawl gala safka magaalada [More ...]
Gaadiidka Cankiridka Laba Maalmood oo Laba Bannaan oo Bilaash ah
Basaska ka dhaca Çankır labada maalmood ee ugu horeysa maalinta waa bilaash: Sida ku xusan bayaan ay soo saartay dowladda hoose Çankırı; Muwaadiniinta, labada maalmood ee ugu horreeya Ciidul Fitriga waxay isticmaali doonaan gaadiidka dadweynaha magaalada oo bilaash ah. Adeegyada Taageerada Dawladda ıankırı [More ...]
Gaadiidka Dadweynaha ee Konya 2-da Maalmood ee Ugu Horeeya ee Bandhigga ayaa Bilaash ah: Dawladda Hoose ee Magaalada Konya waxay qaadatay talaabooyinka lagama maarmaanka ah ee dhammaan unugyada loogu talagalay muwaadiniinta inay si nabad ah oo qunyar socod ah ku qaataan inta lagu gudajiro Ramadaanka Ramadaanka. Intii lagu jiray Axadii [More ...]
Jadwalka Izmir Urla Ferry wuxuu bilaabanayaa: Dowlada hoose ee Izmir, oo isbedel ku sameysay gaadiidka bada iyada oo ay la socdaan maraakiibta jiilka cusub ee ku qalabeysan tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay, ayaa wadadeeda u weecisay marin biyoodka banaanka xilli xagaaga. Foca wuxuu bilaaban doonaa maalinta labaad ee ciida [More ...]
Gaadiidka Gaziantep Bus iyo Tram Free
Gaziantep, Bas iyo Tram waa Bilaash: Dowlada Hoose ee Gaziantep waxay dhameystirtay u diyaar garowga muwaadiniinta si ay ugu qaataan fasaxyadooda jawi deggan, nabad iyo xasilooni leh. Gaadiidka, wax iibsashada oo aaminka ah, xabaalaha, dalxiiska [More ...]
Gaadiidka ayaa badalaya magaalooyinka waaweyn
Fahamka gaadiidka ee magaalooyinka waaweyni waa isbedelayaa: Waxaan u maleynayaa inaysan jirin wax cabasho ah oo ku saabsan taraafikada sababtoo ah ku noolaanshaha magaalada weyn iyo iskudayada inaad meel uun gaarto maalintii. Sanado badan ka hor nüfus Bursa dadkeedu way yaryihiin iyo wadooyin [More ...]
Teleferik ayaa lugta ka gooyay cagta cagta ee Antalya
Teleferik wuxuu jili doonaa cagaha ciidaha Antalya: Antalya Duqa Magaaladda Menderes Türel, oo loo diyaariyay wajiga cusub ee T thenettepe Cable Car iyo Goobaha Bulshada. Baabuurka fiilada leh ee loo yaqaan 'cable cable' wuxuu dadka Antalya u qaadayaa shirkii inta lagu gudajiro ciidaha. [More ...]
Kaamiyada Tramway iyo Qeybta Tababaraha
Ka jawaab celinta taraamka bilaashka ah ee Rugta Minibus iyo Busmen ee Kocaeli [More ...]
Tuulo iyo buundo bilaash ah
Halkan waxaa ah marinnada iyo buundooyinka bilaashka ah inta lagu jiro ciidaha: Wasaaradda Gaadiidka ayaa ku dhawaaqday in inta lagu guda jiro buundooyinka Ciidul Adxaa iyo jidadka waa weyn ay xor noqon doonaan. Laakiin kulligeen waan ognahay inaan bixinno waxyeelada maalin kasta, laakiin bilaash ma'ahan [More ...]
RayHaber 22.06.2017 Warbixinta Shirka
Mashiinka Maydhka Nooca ah ee la Dheelo ayaa la Ibsan doonaa (TÜDEMSA Set) Kabida Gawaarida Sandbenty waxaa laga iibsan doonaa (TÜDEMSAŞ) Grease ayaa la Iibsan doonaa (TÜDEMSAŞ) Dib-u-eegista Dhisidda Nalka Iftiinka iyo Beddelka Beddelka Waxaa Lagu Sameyn doonaa 60 E1 [More ...]
Faransiiska ayaa ku dhawaaqay inuu u wareegayo gaadiidka tareenada aan cidi lahayn ee 2023
Faransiiska ayaa ku dhawaaqay inay u dhaqaaqi doonto gadiidka tareenka ee aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan '2023': SNCF, oo ah maamulaha xadiidka tareenka ee Faransiiska, ayaa soo saaray bayaan siinaya gawaarida iskiis u taagan adduunka mid ka duwan. SNCF waxay bixineysay gaadiid tareen aan iskiis u dhisneyn (iskiis u maamula) ilaa 2023. [More ...]
Tikidhada YHT ee Isdiidh
Tikidhada 'Pre-Bayram YTT' ee kootada Izmit ayaa dhamaanaya: Maaddaama Ciidda Ramadaanka ay soo dhowdahay, qaar waxay fasax u aadaan fasaxyada qaarkood iyo qaraabada qaarkood. Kuwa doorbidaya Tareenka Xawaaraha Sare ee gaadiidka, [More ...]